Private Project can't Online ! — Kiddo Monster™
Author from Golden Land Myanmar
Facebook သုံးပြီး အချိန်ဖြုန်းနေမယ့် အစားတစ်ခုခုလုပ်သင့်တယ်ထင်တာနဲ့ပဲ Forum လေးရေးကြည့်နေတယ်ပေါ့လေ xD Forum ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Facebook သုံးပြီး အလကား စောက်ပေါတွေနဲ့ မနေချင်တာကြောင့် သီးသန့် သဘောမျိုးနဲ့ Knowledge Sharing လုပ်ကြမလားပေါ့လေ။ Short to the point ဖြစ်မယ်၊ အခက်အခဲရှိရင် ချက်ခြင်း ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ပေါ့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ချင်တာပေါ့လေ။ ဖြစ်ချင်တော့ Unicode နဲ့ Zawgyi ဆိုပြီးတော့ နှစ်ခြမ်းကွဲနေပြန်တယ် -,- ( Thank God ) လုပ်ဖြစ်ရင်တော့ Unicode သီးသန့်ပဲသုံးစေချင်တယ်ပေါ့လေ။ ဆိုပေမယ့်လဲ ယူနီကုဒ် သီးသန့်ဆိုရင် Active Member တွေကမရှိသလောက်ရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သဲထဲရေသွန်သလိုဖြစ်ရမယ် … ဒါကြောင့်လဲ Can’t online လို့ပြောတာပေါ့ :3 Active Member မရှိ Staff တွေမရှိပဲနဲ့တော့ Online က Active ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ ရှိပြီးသားဟာတွေတောင် သေသလိုဖြစ်နေတာဆိုလေတော့လဲ အပျော်သဘောနဲ့ပဲ Bill ကုန်ခံပြီး Error တွေရှင်းလိုက် ရေးလိုက် လိုအပ်တာတွေကိုထည့်လိုက်ပေါ့လေ !! Forum ကို Taste သဘောမျိုးနဲ့ အကောင့်မှာတင်လိုက်တယ် အောင်မြင်ချက်ကတော့ ဘယ်သူမှကို ဖုတ်လေတဲ့ ငပိမရှိလေတော့လဲ ဒီတိုင်းလေးပဲ Can’t Online !!!!!!!!! ဆိုတော့ ဂရုစိုက်စိုက် မစိုက်စိုက် ဝါသနာတစ်ခုအရတော့ ရေးကြည့်သလောက်ကတော့ ကိုယ်ကတော့ ကြိုက်တယ် xD Plugin တော်တော်များများကလဲ Mod တွေသုံးထားတာဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေ ဟီး 😛 Error ပြင်ရတာလဲမပြောနဲ့ Theme ကလဲ ခိုးထားတာ Plugin တွေကလဲ ပြုစုတုထားရတာဆိုတော့ အချိန်ကုန် ငွေကုန် အားကုန်ပါပဲလေ :3 ဒီလို Forum ရေးလိုက်တော့ ဘာတွေသိရလဲဆိုတော့ သဘောတရားတွေ အရင်ကမသိခဲ့တာတွေ သိလာခဲ့ရတယ် Bill တာခြင်းအတူတူတော့ တစ်ခုခုကိုသိပြီး ကုန်ရတာပဲ အဖိုးရှိမယ်ထင်တာပေါ့ ! ဆိုတော့ Forum ပဲရေးတော့မယ်လေ xD ဘာလို့ မဟုတ်တာအတွက် အချိန်ကုန် ငွေကုန်ခံပြီးတော့ သုံးနေရပါ့မလဲပေါ့ xD
ဆိုတော့ကာ … အခုလောလောဆယ် ရေးပြီးသလောက် Error လဲရှင်းပြီးသလောက်မှာတော့ … ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြိုက်ရင် ပြီးပြီထင်တာပဲ :3 လူအများကို သိပ်ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ကိုယ့်အတွက်ကတော့ သူများတွေအတွက် သိပ်ပြီးမစဉ်းစားတတ်ဘူး 😛
ဒီလိုကြားထဲမှာ အရသာအဖြစ် Showcase ကိုပြခဲ့ပါသော်လည်း ဂရုမစိုက်တဲ့အတူတူတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Personal Website မှာပဲ Note တစ်ခုအဖြစ်နဲ့သာ ထပ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်လိုက်ရတော့မယ် 🙂
ဒါလေးကတော့ Signin Member တွေမြင်ရမယ့် Home Page !
ဒါလေးကတော့ Guest တွေမြင်ရမယ့် Home Page !
ဒါလေးကတော့ Member Profile !
ဒါလေးကတော့ Help Documents အကြောင်းတွေ !
ဒါလေးကတော့ Credits လို့ခေါ်တဲ့ Point System အကြောင်း !
ဒါလေးကတော့ Showthread လို့ခေါ်တဲ့ Thread တွေကို ဖတ်လို့ရမယ့်ဟာလေးပေါ့လေ !!
ဒါပါပဲလေ xD ဒီ Design က ဒီ Forum က ဘယ်တော့မှ Online ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး :3 ဖြစ်မလာတဲ့အကြောင်းကတော့ လူမရှိလို့ဖြစ်မလာတာပေါ့လေ 🙁 ဓါတ်ပုံတွေက Phone နဲ့ဆို အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ :3 Phone အတွက်ကြီး သီးသန့် အချိန်ပေးမနေချင်ဘူး ( ဖတ်မယ့်လူလဲရှိမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ထူးပြီးလုပ်မနေတော့တာလဲပါတယ် )
This entry was posted in ထွေရာလေးပါး, နည်းပညာ and tagged ထွေရာလေးပါး, နည်းပညာ